निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन, के पर्ला असर ? - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०४:११
निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली संशोधन, के पर्ला असर ?
२०७७ पुष २१, मंगलवार १९:४२ गते
काठमाडौं, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धीको नियमावलीमा संशोधन गरेको छ ।
आयोगले नेकपाको विभाजनलाई ध्यानमा राखेर नियमावली संशोधन गरेको बुझिएको छ ।
नयाँ संशोधनमा निर्वाचन अवधिभर राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा कुनै कारबाही नगरिने व्यवस्थालाई आयोगले हटाइएको छ ।
नियमावलीको नियम १६ को उपनियम १ मा १ ९क० थप गरी विवाद निरूपणपछिको अवस्थामा दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको एउटा उपनियम हटाएपछि आयोगलाई नेकपाको विवाद हेर्ने बाटो खुलेको छ । आयोगले दल दर्ताका लागि छुट्टै समय दिन सकिने व्यवस्थासहितको उपनियम थप गरेको छ ।